प्रदेश-२ – Page3– Halkaro
जननिर्वाचित मेयर नै हत्याको अभियोगमा पक्राउ
रौतहट । जिल्लाको कटहरिया नगरपालिका मेयर सियाराम कशहवा हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका छन्। हिन्दु युवासंघ वीरगञ्जका तत्कालिन अध्यक्ष काशीनाथ तिवारीको हत्याको आरोपमामा उनलार्इ प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले मेयर कुशवाहलाई बिहीवार काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको हो । जिल्ला अदालत बाराले दिएको सफाइ उल्टाउँदै जनकपुर उच्च अदालतले कुशवाहालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । […]
प्रदेश २ का दुर्इ राज्यमन्त्रीलार्इ मोदीले अयोध्याका लागि विदाइ गर्ने युपीका मुख्यमन्त्री योगी अादित्यनाथले स्वागत गर्ने
जनकपुर । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अयोध्या सर्किटको शुक्रबार उदघाटन गर्दै छन्। सोही अवसरमा जनकपुर अयोध्या बस सेवा समेत सुरू गरिँदै छ। बस सेवाको उद्घाटन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जानकी मन्दिरबाट गर्नेछन्। दुर्इ प्रधानमन्त्रीले जनकपुरबाट प्रदेश २ का दुर्इ राज्यमन्त्रीलार्इ अयोध्याका लागि विदाइ […]
जनकपुरधाम । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुरधाम भ्रमणको कार्यसूची तयार भएको छ । दुई दिवसिय नेपालको भ्रमण मोदीले जनकपुरधामबाट प्रारम्भ गर्नेछन् । मोदी नागरिक अभिनन्दनको सभापतित्व प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले गर्ने छन् । जनकपुर उपमहानर पालिकाका मेयर लालकिसोर साहले अभिनन्दनपत्र वाचन र नगरको साँचो हस्तांतरण गर्ने छन् । संघिय सरकारका वरिष्ठ मन्त्री […]
मोदी अगावै भारतीय एयर फोर्सको हेलिकोप्टर किन अायो जनकपुर ?
जनकपुरधाम । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमण तयारीबारे भारतीय पक्षले चासो देखाएको छ । २८ वैशाखमा हुने भ्रमण तयारीको जानकारी लिन भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरी नेतृत्वको टोली बुधबार जनकपुर आएको छ । यता भारतीय इन्डियन फोर्सको हेलिकोप्टर बुधबार बाह्रबिघा मैदानमा अवतरण गरेको छ । जेडपी ५११९ हेलिकोप्टर पूर्वाभ्यासका लागि आएको हो । मोदी पटनाबाट […]
जनकपुरधाम । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वैशाख २८ गते जनकपुर भ्रमणमा आउँदैछन् । भ्रमण तयारीको जानकारी लिन भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरी नेतृत्वको टोली बुधबार जनकपुर आएको छ । मोदीको स्वागतका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओली जनकपुर आउने भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले मोदीलाई जानकी मन्दिर परिसरमा स्वागत गर्ने र सँगै जानकी मन्दिरमा पूजा गर्ने तयारी भइरहेको […]
मोदीको सुरक्षाका लागि भारतीयले बनाए यस्तो सुरक्षा योजना सात हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने
धनुषा । भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण नाकाबन्दीदेखि बिग्रेको सम्बन्ध पुनस्र्थापित गर्न लक्षित गर्ने दिल्लीको तयारी छ । मोदीले आसन्न राजकीय भ्रमणमा नेपालसँग एकसाथ राजनीतिक, विकास साझेदारी र धार्मिक सम्बन्ध सुदृढ भएको सन्देश दिन चाहेका छन् । खासमा तीन वर्षअघि नेपाल आउँदाको सकारात्मक छवि पुनस्र्थापनामा उनले जोड दिनेछन् । २८ र २९ वैशाखमा मोदी नेपाल आउने […]
जनकपुरधामको साँचो भारतलार्इ सुम्पने तयारी
जनकपुर । भ्रमणमा आउदा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई जनकपुरधामको साँचो बुझाउने तयारी भईरहेको छ । धार्मिक तथा ऐतिहासिक शहर भएपनि विकास निर्माणमा पछि परेकोले जनकपुरको विकासलाई कसरी अगाडी बढाउने जिम्मेवारी सहित जनकपुरको साँचो मोदीलाई दिने मेयर लालकिशोर साहले बताए । नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धमा जनकपुरको योगदान महत्वपुर्ण रहेकोले यहाँको विकासलाई गति दिन भारतीय सहयोग आवश्यक […]
काठमाडौँ भन्दा अगाडि मोदीको जनकपुर प्रवेश, के छ यसको रहस्य?
काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमण हुने भएपछि राज्यसंयन्त्र त्यसको तयारीमा लागेका छ । वैशाख २८ गते दिल्ली हुँदै विहारको राजधानी पटनाबाट भारतीय सेनाको हेलिकोप्टर मार्फत नेपाल प्रवेश गर्ने छन्। उनको हेलिकोप्टर धनुषाको जनकपुरधाम स्थित बाह्रबिघामा अवतरण गर्ने छ। त्यहाँ देखि उनी जानकी मन्दिरको दर्शन गर्ने छन्। मोदीको स्वागतका लागि प्रदेश २ को […]
पार्टी एकताका लागि मदन भण्डारीसँग छलफल चल्दा चल्दै उहाँको हत्या भयोः प्रचण्ड
रौतहट । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्डले वाम एकता जनताको साझा सम्पति भएको बताउनु भएको छ । बिहिवार रौतहटको चन्द्रपुरमा आयोजित पार्टी कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘अहिले सिंगो देशले एकता चाहेको छ, हामीले सम्मानित, न्यायोचित र समानताका आधारमा एकता गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने चुनौति पनि छ ।’ अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी एकता […]
प्रधानमन्त्री ओलीले सिराहा पुगेर दुई बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराए
प्रकाशित मिति : २०७५, ५ बैशाख बुधबार
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिराहाका दुई बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराएका छन्। उनले सिराहाका रुपाकुमारी मण्डल र पवन मल्लिक डोमलाई रामदुलारी माध्यामिक विद्यालय कल्याणपुरमा भर्ना गराए हुन। उनीहरूलाई भर्ना गरेसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले निरक्षरता उन्मुलन गर्न उमेर पुगेका बालबालिका विद्यालय भर्ना गर्न सबैलाई आग्रह गरेका छन्। दुई बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले टुईटरमा लेखेका […]